Faahfaahin: Dilal xalay ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Faahfaahin: Dilal xalay ka dhacay Muqdisho
Xarunta Hay’adda Dambi baarista ee CID-da ee Magaalada Muqdisho ayaa la geeyay meydka labada Askari iyo ninka la sheegay in uu ka tirsanaa Ururka Al-Sbabaab.
MUQDISHO, Soomaaliya - Axmadeey Gadaf iyo Sakariye Cali Aadan oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen ciidamada Milatariga Soomaaliya ayaa xalay kooxo ku hubeysan bistoolado ku toogteen degmada Karaan ee gobolka Banaadir.
Labada askari ee la dilay ayaa si weyn looga yaqaanay Karaan, kuwaas oo muddo badan ka soo shaqeeyay Gudaha degmada Kaaraan.
Ragga dilka geystay oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-shabaab ayay mid kamid ah goobta ku dileen askar kale oo ku sugnaa halka uu falka dilka ah ka dhacay, sida ay Keydmedia online u sheegeen dad goobjoogayaal ah.
Ciidamada Booliska degmada oo goobta soo gaaray dhacdada kaddib ayaa sameeyay baaritaan ay ku baadi goobayaan raggii dilka geystay ee baxsaday ilaa iyo haddana wax natiijo ah kama soo bixin howlgalkii ay sameeyeen.
Falalka dilka ah ee loo geysto askarta dowladda iyo shaqaalaheeda ayaa maalmihii la soo dhaafay ku soo kordhayay caasimadda, taas oo muujineysa sida amniga magaalada uu faraha uga sii baxayo.